XOG XASAASI: Ma dhabbaa in Fahad Yaasiin uu kulan qarsoodi ah la qaatay Xubno Mucaarad ah? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Ma dhabbaa in Fahad Yaasiin uu kulan qarsoodi ah la...
XOG XASAASI: Ma dhabbaa in Fahad Yaasiin uu kulan qarsoodi ah la qaatay Xubno Mucaarad ah?
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomsaliya ayaa sheegay in Agaasimaha Sirdoonka Soomaaliya kulan qarsoodi ah uu la qaatay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyaha baraha bulshada ayuu ku sheegay in Fahad Yaasiin ka dalbaday muddo kordhin loo sameeyo Madaxweyne Farmaajo.
“Fahad Yasin ayaa kulan qarsoodi ah ugu yeeray xubno muhiim ah oo ka tirsan UPD. Wuxuu soo jeediyay in Xukuumadda lala wadaago lagalana shaqeeyo muddo kordhin loo sameeyo Madaxweyne Farmajo. Ujeedada uu soo-jeedinta noocan ah ka leeyahay waa in shaki la kala dhex dhigo isbahaysiga xisbiyadda waaweyn ee mucaaradka ah. ” Ayuu ku yiri Qoraalka uu soo dhigay Boggiisa xiriirka Bulshada Xildhibaanka.
Farmaajo muddo kordhis raba
Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil